Olee otu temometa temometa si arụ ọrụ? | Netwọk Mgbasa Ozi
Portillo nke German | | Ngwaọrụ gbasara ihu igwe, Meteorology
Kemgbe oge ụfọdụ, Mercury temometa adịla adị ruo taa. N'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụlọ ọ bụla enwere temometa nke Mercury. Ka oge na-aga a kwụsịrị ha ebe ọ bụ na achọpụtara ya na ọ nwere ike ịdị oke egwu ma ọ bụrụ na ọ gbajie. E nwere ọtụtụ ndị na-amaghị nke ọma olee otu temometa nke arụ ọrụ. Nke a bụ otu n'ime ihe ndị kpatara eji machibido ya iwu ebe ọ na-akwụghị ụgwọ maka nsogbu ọ dị na ọghọm mgbe ị na-eji ya.
Yabụ, n'isiokwu a, anyị ga-egosi gị otu okpueze mercury si arụ ọrụ.
1 Akụkụ ndị bụ isi nke temometa nke Mercury
2 Olee otu temometa temometa na-arụ ọrụ
3 Otu esi aguta ebe a Mercury
4 Ndị ọzọ na temometa ndị a
Akụkụ ndị bụ isi nke temometa nke Mercury
Ọ bụ ihe e ji atụ okpomọkụ, nke nwere bọlb nke nke tube dị gịrịgịrị nke enyo mee. N'ime bọlb ahụ bụ ọla mercury. Ngwurugwu a ahọrọla ebe ọ bụ na olu ya na-agbanwe dabere na ọnọdụ okpomọkụ. Ọ Ngwaọrụ nwere ọnụọgụgụ nke na-egosi ụkpụrụ okpomọkụ. Dabere na ụkpụrụ ndị a, olu ga-ebili ma ọ bụ daa. A na-eji ọla a nwere ike ịnwe nnukwu ụlọ ọrụ mgbe ọ gbanwere olu ya ma gosipụta data ahụ nke ọma.
Nyere ịdị mfe ya na ịrụ ọrụ ya ma a bịa n’ihe ọ̀tụ̀tụ̀ banyere ọ̀tụ̀tụ̀ okpomọkụ, ọ ghọrọ ngwá ọrụ zuru ebe nile n’ụwa. Ọ ọnụahịa nke temometa nke Mercury ọ dị nnọọ ọnụ ọnụ site na ọnụ ọgụgụ mmadụ niile. Sayensị na-amụ banyere okpomọkụ a maara dị ka thermology nwere nnukwu ọganihu n'ihi temometa Mercury. Ọnọdụ okpomọkụ ọ nwere ike ịnabata bụ nnukwu.
Olee otu temometa temometa na-arụ ọrụ
Ozugbo anyi matara ihe udiri ihe oru a ka anyị hụ otú o si arụ ọrụ site na nzọụkwụ. Igwe ihe omimi nke Mercury nwere onu ogugu ndi na egosiputa otutu okpomoku. Nọmba ndị a tụrụ site na obere mkpa nke adọtara na etiti. Akara a bụ onye na-ahụ maka igosi uru nke okpomọkụ a na-atụ. Ọ bụrụ na anyị chọrọ iji ya mara ahụ okpomọkụ, ihe kacha dị mma bụ itinye bọlb n'okpuru ire, na ikensi ma ọ bụ akpa abu. N'ụzọ dị otú a, anyị nwere ike ịlele ahụ ọkụ site na ịlele ahụ ọkụ.
Ka anyị lee nzọụkwụ site na otu otu temometa temometa si arụ ọrụ:
Nhicha bọlbụ ahụ: Nke mbụ, hichaa bọlbụ ahụ site na akụkụ igwe nke temometa na pad owu na-etinye mmanya na-egbu egbu. N'ụzọ dị otú a, anyị nwere ike igbochi akụkụ ahụ nke ga-abanyekarị na ahụ anyị.
Anyị na-agbasi mbọ ike mee ka temọta Mercury: Iji mee nke a, anyị ga-eji ya na akụkụ nke ọzọ na bọlbụ. N'ihi mmegharị a, anyị nwere ike ịme ihe fọdụrụ na Mercury nke fọdụrụnụ gbadata ma kwe nkwa na ọnọdụ okpomọkụ egosiri bụ eziokwu.
Anyị na-etinye temometa n'ime akpa abu: bọlbụ ahụ ga-abụrịrị ihe ziri ezi na etiti akpa ahụ ka ị nwee ike ịlele ụkpụrụ okpomọkụ dị mma. Na-esote, anyị na-ahapụ ogwe aka ahụ n'apata na-enweghị ebugharị ya mgbe anyị na-ekwe ka ọnọdụ okpomọkụ bilie mercury ma lelee ma ị nwere ahụ ọkụ.
Anyị na-eche ihe dị ka nkeji ise: Olee ihe enyemaka bụ oge ọ na-ewe maka Mercury ịrị elu na-egosi ahu okpomọkụ. Ọ dị mkpa oge oge anyị na temometa na-arụ nke ọma, ebe ọ bụ na otu a anyị ga - ezere iwepu ya n'oge.
Kpoo ya ọzọ: Iji wedata mercury ọzọ, anyị ga-emegharị temometa ọzọ. N'ikpeazụ, ihe kachasị mma bụ idebe ya nke ọma na ya ka ọ ghara ịgbaji. Anyị maara na Mercury metal bụ nsi ma iko bụ nnọọ kenkuwa. Ọ dịkwa mma ịmịnye ya mmanya ọzọ tupu ịchekwa ya.
Otu esi aguta ebe a Mercury
Ọbụghị naanị na ị ga - ama etu esi temometa nke mercury na - arụ ọrụ, kamakwa mara etu esi atụgharị data ahụ. Iji mee nke a, ị ga-amụta ịgụ ya n'ụzọ ziri ezi. Mgbe anyị cherechara nkeji ise maka ọnọdụ okpomọkụ na-ebili, anyị na-ewepu temometa ma na-ele anya na etiti. Ọ bụ ahịrị a na-enyere anyị aka igosipụta ahụ ọkụ. Dabere na uru ha nwere, anyị maara ma anyị nwere ahụ ọkụ.
Ọ dị mkpa ịmegharị temometa nwayọ nwayọ ebe ọ bụrụ na ahụghị ahịrị Mercury nke ọma, a ga-ebugharị ya. Ọ bụrụ na akara ahụ gafere ogo iri atọ na asaa anyị maara na anyị nwere ahụ ọkụ. Ọ bụrụ na ọ gafere naanị otu ụzọ n’ụzọ iri ọ dịghị mkpa ichegbu onwe gị. Ọ bụrụ na ọnọdụ okpomọkụ dị ogo 40, ọ ka mma ịlele ọnọdụ okpomọkụ ma ọ bụ gaa dọkịta ozugbo.
Etu esi enweta temometa nke Mercury: Ihe ị ga - eme ma ọ bụrụ na ọ daa
Otu n’ime ihe ndị gbara ọkpụrụkpụ bụ ịmata ihe ị ga-eme mgbe tempremier emetọ. Ọ bụrụ na ihe ọghọm ọ bụla dapụ n'aka anyị wee daa n'ala, na-agbaji iko ahụ, anyị ga-enwerịrị usoro iwu maka ịrụ ọrụ. Ihe kacha mma bụ ikuku ikuku na gburugburu ebe obibi dika o kwere mee iji zere iku ume vapo. Ngwurugwu a na-egbu egbu ma ọ bụrụ na ọ na-eku ume ma nwee ike imebi ụbụrụ, nsogbu akpụkpọ ahụ, nsogbu afọ, wdg.
Tupu ịga n'ihu ịnakọta obere bọọlụ mercury nke na-etolite mgbe temometa gbajiri, anyị ga-etinye ihe nkpuchi na uwe iji chebe onwe anyị ghara iku ume vapors. Ọzọkwa, kọntaktị ọ bụla na anụ nwere ike ibute nsogbu ka njọ. Yabụ, nke kachasị mma bụ ịnakọta ma chọpụta nke ọma na a na-achịkọta nkume pel Mercury.
Ọ bụghị ihe amamihe dị na ya iwepụ ihe ndị ọzọ nke Mercury n'akụkụ mposi, ebe ọ bụ na ọ na-emerụ ihe karịrị 1000 lita mmiri n'ụzọ na-enweghị isi.
Ndị ọzọ na temometa ndị a
E nwere ụfọdụ ndị ọzọ na-adọrọ mmasị ndị ọzọ na mercury temometa, ebe ọ bụ na ọ bụghị azụmahịa dị taa. Ka anyị lee ihe dị iche iche bụ:
Digital temometa: Ọ bụ nke a na-eji otu ụkpụrụ ahụ eme ihe dị ka temometa mercury.
Temometa nke infrared: na-eme ka ikpo oku site na ncha ocha nke aru. Ha adịghị emerụ ahụ ike.
Baby temometa: Ha bụ akwara temomita nke anyị nwere ike iji chọpụta ma ụmụ anyị ọkụ.
Enwere m olile anya na iji ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere otu temometa temometa si arụ ọrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ngwaọrụ gbasara ihu igwe » Olee otu temometa temometa si arụ ọrụ?